Creative Writing » လက်ခံရခက်ခဲသော…………	54
ကျနော်ကတော့ အဲ့လို အမှန်တရားတွေကို hard truth လို့ နာမည်တပ်ပေးချင်ပါတယ်။ ——————————-
ခံရခက်ခက်နဲ့ အမှန်တရား အတော်များများကို အဲ့ကာလမှာ လက်ခံခဲ့ရတယ်။ ဒီအကြောင်းကို ချစ်လှစွာသော ဂျီးဒေါ် ခင်ဇော် နဲ့ စကားစပ်မိတော့ ပြောဖြစ်ရဲ့ (နှစ်ယောက်စလုံး အဆင်မပြေတာတွေနဲ့ နပန်းလုံးနေရတာ ကြိုညှိထားသလားမှတ်ရ) ပြောရင်း ပြောရင်း hard truth ဘက်ကို ရောက်သွားတယ်။
ရှာတွေ့ပြန်တော့ ဦးဂူဂဲ က အင်္ဂလိပ်လိုပဲ ပြောထားပေးတာမို့ မြန်မာလို ပြန်ပြောင်းဖို့ လိုလာပြန်ရော နှစ်ယောက်သား ခေါင်းချင်းဆိုင်ပြီး ဘာသာပြန်ကြည့်တာ အမြီးအမောက် မတည့်တာတွေပဲ ထွက်လာတာမို့ ဘာသာပြန်ကိစ္စ အတွက် ရွာထဲက သန်းကြွယ်သူဌေး ကိုဘလှိုင် ကို အကူအညီတောင်းပြီး ဘာသာပြန်လိုက်ရတယ်။
သူက တစ်ချက်ချင်းစီ ဘာသာပြန် ကျနော်တို့ တူအရီး နှစ်ယောက်က အောက်ကနေ စိတ်ကူးတည့်ရာ ဝင်ပြော ပေါ့လေ။ အဲ့လို အဲ့လို သုံးပွင့်ဆိုင် ဆွေးနွေးထားတဲ့ ဖျဉ်းရှရှ အမှန်တရားတွေကို ဖတ်ကြည့်ကြပါဦး။
ဖတ်ပြီးလို့ အတွေးတစ်ခုခု ပေါ်လာရင်လည်း ဝိုင်းပြီး ပြောကြ ဆိုကြတာပေါ့ဗျာ။ 1. There is no true love.
KZ – Melificent ထဲက စကားပဲ။ လက်မခံချင်ပေမဲ့လည်း ဒီခေတ်မှာ ဒါဟာ အမှန်တရားတစ်ခု ဖြစ်နေပြီ။ Mister Marga – အရာရာတိုင်းကို အရှုံးအမြတ် တွက်နေတဲ့ ခေတ်ပဲလေ…
ဒါကြောင့် ထာဝရ ရန်သူ ဟူသည် မရှိ။ ——————————————
…………………………………. မရှိ… Mister Marga – သူ့စိတ်နဲ့ ကိုယ့်ကိုယ် (နှစ်ကိုယ့်တစ်စိတ်) နေဖို့ဆိုတာ အသာထား…
Ko Ba Hlaing – ကိုယ်က သာမည၊ အထာကျအောင် လက်ခံ။ (ကိုယ်က သာမည၊ သူက ကျိုက်ထီးရိုး ) KZ – ဘယ်သူ့ အတွက်မှ ကိုယ်က အရေးကြီးတဲ့ မရှိမဖြစ် လူ တစ်ယောက်မဟုတ်…
Mister Marga – ကိုယ်က သူ့အတွက် ဘယ်လောက်ပဲ အရေးပါတယ်ပြောပြော သူ့ကိုယ်သူထက် ဘယ်သူမှ ပို အရေးမကြီးဘူးရယ်။
အကျိုးအမြတ် တစ်ခုအတွက် တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ပြောဆိုဆက်ဆံနေကြတာပါပဲ။ win-win situation မှာတောင်မှ သူ့အတွက်လည်း အကျိုးအမြတ်ကျန်အောင် လုပ်ပေးရသေးတယ်မလား…
KZ – ကိုယ့်မှာလည်း အဲ့ဒီ အမှန်တရားအများကြီးမို့… သူများရဲ့ အဲ့ဒီ မုသားတွေလည်း ခွင့်လွှတ်တယ်။ အဟေးဟေး…. Mister Marga – အမှန်တရားဆိုတိုင်း သိကောင်းတယ်များ ထင်နေသလားဗျ။ ဘယ်ကိစ္စမှာမဆို လျှို့ဝှက်ချက်ဆိုတာ ရှိနေမှ။ Transparency ဆိုတာ အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိပဲ ကောင်းတယ်လေ။
မယုံရင် ပလတ်စတစ် အကြည်စကို အဝတ်အစားချုပ်ဝတ်ကြည့်ပေါ့ (အနည်းဆုံး ခွေးလိုက်ဆွဲခံရမယ်) ဒါကြောင့် သိရင်တောင် မသိချင်ယောင် ဆောင်ပြီး လွှတ်ပေးလိုက်ပါ။
မစားတဲ့ အမဲ သဲနဲ့ပက်မယ်။ မရတဲ့ စပျစ်သီးချဉ်မယ်။ ဒါပဲ။
KZ– မှန်တယ်။ မှန်တယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒါကိုပဲ တွယ်ကပ်နေမိတာ နှစ်ပေါင်းများစွာ…
အဲ့ အတ္တ ကို နည်းနည်းလေးပဲ လျှော့ကြည့်လိုက်ပါ… လောကကြီးဟာ ပျော်စရာအရမ်းကောင်းသွားမယ်။ ဘာကြောင့် ကိုယ့်အတွက် အကျိုးမရှိတဲ့အရာတွေကို အကြောင်းမဲ့သက်သက် တွယ်ကပ်နေချင်ကြတယ်ဆိုတာ စဉ်းစားလို့ကို မရဘူး ——————————–
KZ– ခု အသက် ၃၀ နောက်ပိုင်းတော့ ဘယ်သူ့ကိုပဲ တွေ့တွေ့ ခွဲခွါဖို့ အကြောင်းအရာကို အလိုလို စဉ်းစား အသင့်ပြင်ပြီးသားဖြစ်နေတတ်ရဲ့။ Mister Marga – အမှတ်တမဲ့ပဲ တွေ့တွေ့…
Mr. MarGa says: မျက်ရည် မကုန်သေးဘူးလား ဟင်
La Yeik says: မုသားဆို ခံရသူအတွက် အဆိုးဆုံးအရာမှာ (မိမိသည်) အမှန်တရားနှင့်မထိုက်တန်ကြောင်း သိလာရခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
Mr. MarGa says: ပြောပါတယ်….
ပြီးတော့ အကုန်လုံးဟာ အမှန်တရားတွေဘာ.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 3137
surmi says: အူလည်ချာလည်ဖြစ်သွားတယ်ကွာ
Mr. MarGa says: နေ့စဉ်ကြုံတွေ့နေရတဲ့ လူမှုဘဝမှာ သီးသန့်ဖြစ်တည်နေတာတွေပါ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 7172
kyeemite says: .ပထမဆုံးကတော့ ရှာဖွေလေတွေ့ရှိလေလုပ်တဲ့ ကိုရင်မာဃကိုချီးကျူးပါတယ် .ဒုတိယကတော့ မောင်ဘလှိုင်ရဲ့ဘာသာပြန်လှပမှုကိုလက်ဖျားခါပါတယ်..ဘာသာပြန်သူဆိုတာ
.မြန်မာစာပါကောင်းကောင်းကျွမ်းကျင်ရတယ်ဆိုတာပြသွားတာပဲ .တတိယကတော့ အသက်ဝင်အောင် ၀င်ဆွေးနွေးပေးနိုင်တဲ့ လူမိုက်ခင်ဇော်ကို ချီးကျူးဗြဇေ .နောက်ဆုံးအနေနဲ့တော့စာကိုဖတ်ရင်းအောက်ကပုံတွေအတိုင်း ရသမျိုးစုံခံစားသွားပါတယ်လို့ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4670
ခင် ခ says: စတုတ္ထတစ်ယောက်ကို ကျုပ်က ချီးကျုးပါတယ်။
Mr. MarGa says: အဲ့လူရီး
ရှာဖွေလေ တွေ့ရှိလေ လုပ်သွားတာ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 5021
Mr. MarGa says: ဦးမိုက်
ခင်ဇော် says: မိုးလတ် ဘာသာပြန်တာကို အတော် သဘောကျတယ်။
မောင်ဘလိူင် says: အဲ.ဦးမာဃ တို့ကတော့ လုပ်ပြီဟ..။ တစ်ချို့ ကုတ် တွေက ဓမ္မပဒ ထဲက
Mr. MarGa says: ကြာတော့ ဘယ်ထဲကလဲ မသိတော့ဘူးဗျ
ငယ်ငယ်ကမှတ်ထားမိတာဆိုတော့ ရောကုန်ပြီ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 3713
လုံမလေးမွန်မွန် says: ဟင့်​.. ငိုချင်​ထှာ.. အလုပ်​​တွေကြားထဲ.. အိပ်​ချင်​စိတ်​ကို​ဖျောက်​ရင်း.. နံပါတ်​ ၆ နဲ့ ၁၁ ကို ခံစားရင်း အီကွန်​မန့်​ကို ​ရေးလိုက်​ပါတီ..
Mr. MarGa says: ငိုချလိုက်… ငိုချလိုက်… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12381
ခင်ဇော် says: ဘာ !!
မဟာရာဇာ အံစာတုံး says: 6. Hidden Truths are Unspoken Lies . သိပ်မှန်တဲ့ စကား ….။
Mr. MarGa says: ကြော်ငြာလာဝင်သွားသေး
Shwe Ei says: -ထာဝရ ရန်သူ ဟူသည် မရှိ။
အကုန်လုံးက မှန်ဒယ်……. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 5021
Mr. MarGa says: ထားပါတော့…ငါ့ဘက်မှားတာ…ပြောပါတော့…ငါ့ဘက်မှားတာ…မုန်းပါတော့..ငါ့ဘက်မှားတာ.. ငါ့အပြစ်တွေဘဲ……
ငါ တြောက်ထဲဘဲ မှားတာဘာာာစ် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12381
ခင်ဇော် says: ဘွနဲ့ ရင်းပြီး သိလာတဲ့ အမှန်တရားတစ်ချို့!!!
ဂျက်စပဲရိုး says: အဲ့ဒီ hard truth တွေကို လက်ခံပြီး ပြောဆို နေထိုင် ကျင့်ကြံလိုက်တဲ့ အခါ မှာ လူလဲ တဖြည်းဖြည်း ရွာပြင် ရောက် ရောက် လာသလိုလိုပဲ…. :P
ခင်ဇော် says: ရောက်ခါမှ ရောက်ရောပဲ။
Mr. MarGa says: ရွာပြင်ရောက်သူများမှ ကြိုဆိုပါတယ် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12381
ခင်ဇော် says: သများ ရဲ့ လက်ခံရခက်ခဲတဲ့ အမှန်တရားတွေ မနည်း ရှာထားရတာ။
kai says: ဘာသာပြန်တော်တော်”လှ”သဗျ..။
Mr. MarGa says: အဲ့ဒါ…. အဲ့ဒါ…..
kyeemite says: . 4.You are not important. Just get used to it
.Ko Ba Hlaing – ကိုယ်က သာမည၊ အထာကျအောင် လက်ခံ။ . 2.There is no such thing asasoul mate
.ဒီဘာသာပြန်ချက်တွေလွှတ်မိုက်တယ်ဗျာ…တကယ် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 5021
Mr. MarGa says: Getting no message is alsoamessage
Yae Myae Tha Ninn says: လက်ရှိတော့ တွေးစရာတွေ ပေးလို့ ကျေးဇူး… နောက်မှ ထပ်ပြန်မန့်မယ်.. အခု ၆ မှာ တစ်နေတယ်… Run Through တော့ အကုန်ပြီးပြီ… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 5021
Mr. MarGa says: အမ် ဒါဆို ၆ ထိပဲ ဖတ်ရသေးတဲ့သဘောပေါ့
အလင်းဆက်@မောင်သူရ says: ကောင်းလိုက်တဲ့ပိုစ့်လေး
Mr. MarGa says: စာနဲ့လူနဲ့ ခွဲကြည့်ပါကွီ
nicolus agral says: wow
Mr. MarGa says: wow – world of warcraft လား ဟင် :P
uncle gyi says: သိကြားကအမှန်တရားကိုလက်ခံဖို့ခက်တယ်ဆိုတော့
Mr. MarGa says: အမ်..
လက်မခံဝူးလို့ ပြောဝူးလေ အီးကယ်ဂျန်ရ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 58
kolumbus says: အရင်​ဆုံး
Mr. MarGa says: အဲ့ဒါဆို အတ္တကျန်သေးတယ် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8068
မြစပဲရိုး says: သုံးယောက်ပေါင်းပြီး Rap သီချင်း ဆို နေ ကြတာ များလား။
Mr. MarGa says: ရက်ပ် စာသားတွေထက် လန်းပါတယ် အရီးခင်ဗျ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8068
မြစပဲရိုး says: ထောက်ခံပါ့။
Iris says: သဂျား ဘာ​တွေ မန်းမှုတ်​ထားလည်းမသိဘူး။ ကွန်​မန့်​​ရေးတာ ၂ခါရှိပြီ ​ပျောက်​သွားလို့မ​ရေး​တော့ဘူး။
Mr. MarGa says: ဘာမှ မမန်းရ မမှုတ်ရပါဘူးဗျ (သဂျီးကလိတာဖြစ်မယ် )
တကယ်က စိတ်ထားတတ်ဖို့ပဲ လိုတာပါ လို့ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 3276
pooch says: 5.Getting no message is alsoamessage…
I’ll love you long, long after you’re gone……. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12381
ခင်ဇော် says: ဝေးဝေးကသာ ချစ်ပါမည်။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1350
၀င့်ပြုံးမြင့် says: .ဘာသာပြန် တော်လိုက်တာ ကိုဘလှိုင်ရေ။ အစ်မတောင် အဲသလောက် ချောချောမွေ့မွေ့ မပြန်တတ်ဘူး။
ခင်ဇော် says: ဟမ်မလေးးး
Lay Pai says: Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 3919
weiwei says: လောကကြီးထဲမှာ အမှန်တရားဆိုတာ ဘာမှမရှိဘူးနဲ့တူပါတယ် ..
မောင်ဘလိူင် says: Hidden truth ဆိုတာက..အန်​တီပြုံး​ရေ..ကျွန်​​တော်​ နားလည်​သ​လောက်​ ဥပမာ​လေး စဉ်းစားကြည့်​တယ်​။ ကိုယ့်​အသက်​ ကိုယ့်​ပါစင်​နယ်​ စသည်​ဖြင့်​​ပေါ့​လေ လူများမသိ​စေချင်​တာ ရှိမှာ​ပေါ့။ အလိုက်​ကန်းဆိုးမသိ ​မေးရင်​ လိမ်​​ပြောရမဲ့ အ​ခြေအ​နေမျိုး ကြုံနိုင်​ပါတယ်​။ ​နောက်​တစ်​ခုကျ​တော့ အလိမ်​ခံရတာထက်​ ဪ ငါ့နှယ်​ အမှန်​အတိုင်း သိခွင့်​မရှ​အောင်​ ဖြစ်​​နေပါ​ပေါ့လားဆိုပြီး နာကျည်းရတာကို ဆိုတာဖြစ်​မယ်​။ :-)
nozomi says: ဘာသာပြန်တာကို လှတယ်လို့ အားလုံးက သဘောကျကြတယ် လှမှာပေါ့ ပြန်သူတွေက စိတ်လဲလှ လူလဲလှ ကိုး
ခင်ဇော် says: အမယ်။
Mr. MarGa says: ပထမ မှတ်ချက်ကို သဘောတူပါကြောင်း Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike LeaveaComment Cancel replyYou must be logged in to postacomment.	My Points	You need to be logged in to view your points.